AKHRISO: Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladdaha ka taagan magaalada Laascaanood & Ciidamo la dhigay duleedyada, meelaha muhiimka ah ee magaalada – Puntlandtimes
AKHRISO: Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladdaha ka taagan magaalada Laascaanood & Ciidamo la dhigay duleedyada, meelaha muhiimka ah ee magaalada
LAASCAANOOD(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in ay caawa degan tahay xaaladda magaaladu, waxaana muuqata in saan-saan dagaal ay maanta gashay magaalada, taas oo ka duwan sidii ay ahayd maalmihii ugu dambeeyey.
Somaliland waxay soo galisay caawa ciidamo cusub oo ay dhigtay xarunta maamulka degmada, gobalka & Saldhiga magaalada, taas oo ka dambeysa ka dib markii ogaadeen wararka sheegaya in dad hubeysan ay magaalada doonayaan in ay banaanbaxyo ka dhigaan.
Sidaas oo kale halka lagu tukado Salaadaha Ciidaha ayaa la adkeeyey ammaankeeda, waxaana tagaya qaar kamid ah madaxda Somaliland ee kusugan magaalada Laascaanood, iyadoo ay soo baxayaan warar kala gedisan.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in ay dadku maanta si cad ugu sheegeen saraakiisha Somaliland ee isku dayday in ay xaaladda dajiso in ay banaanka u soo bixi doonaan oo ay si wanaagsan isku arki doonaan labada dhinac.
Xiisadaha ka jira magaalada ka sokow deegaanka Tukaraq waxaa ka aloosan colaaad cabsi weyn laga qabo in saacadaha soo socda uu ka qarxo dagaal toos ah, waxaana welwelka ugu badan laga qabaa dagaalkaas oo saameyn adag yeesha.
Puntland waxay ku hanjabtay in ay xoreynayso Laascaanood, markale ayay ku celisay maanta in Somaliland ay heshiis ku yihiin dagaal rasmi ah oo ay ku qaadayaan Gobalka Sool oo luuqadda ay ku wada hadlayaan ay tahay oo kaliya mida dagaalka.